Midowga Yurub oo ururka Xisbullah u aqoonsaday Urur Argagixiso | Somaliska
Wasiirada arimaha dibada ee ururka Midowga Yurub (EU) ayaa heshiis ku gaaray in garabka milatariga ee ururka Xisbullah ee ka dhisan Lubnaan loo aqoonsado mid argagaxiso. Ururka Midowga Yurub oo horay uga cagajiidayay arintaan ka dib cadaadis kaga yimid dhinaca Maraykanka iyo Israel ayaa hada u muuqda mid badalay aragtidooda.
Dowladaha Ingiriiska iyo Holland ayaa qaasatan daba ka riixayay arintaan, iyadoo wasiirka arimaha dibada Holland uu warbaahinta u sheegay ka dib go’aanka. “Waa arin wanaagsan in Midowga Yurub ay Xisbullah u aqoonsato urur argagixiso. Sanado badan ayaan u doodaynay in arintaan la sameeyo”.
Go’aanka wasiirada ayaa ka dhigaya in la xayiro dhaqaalaha ay leeyihiin xubnaha ka tirsan ururka Xisbullah qaasatan kuwa dhinaca ciidanka ku jira. Waxaa kale oo lagu soo rogi doonaa mamnuuc dhinaca safarka ah oo aysan ku imaan karin wadamada Yurub. Go’aankaan ayaa la aaminsanyahay in ay ka dambeyso ururka Xisbullah oo ku biiray dagaalka ka socda Suuriya iyagoo taageeraya dhinaca Madaxweynaha dadkiisa xasuusay ee Bishaar Al Asad iyo sidoo kale iyaga oo la aaminsanyahay in ay ka dambeeyeen qarax sanadkii hore ka dhacay magaalada Burgas ee dalka Bulgaria kaasoo lagu qarxiyay Bas ay saarnaayeen dalxiisayaal Yuhuud ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan la ogeyn sida EU ay u kala sooci karto garabka ciidanka iyo garabka siyaasada ee Ururka Xisbullah oo qeyb weyn ka ah dowlada Lubnaan.
Gudoomiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrallah oo ahaa nin laga jecelyahay dunimada Muslimiinta ayaa bilihii la soo dhaafay la soo baxay waji cusub oo uu ku muujinayo cadaawada uu u qabo suniyiinta, isagoo sheegay in ay difaacayaan madaxweynaha Suuriya oo ah nin shiico ah.